Xikmadda Eebbe, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Axdiga Cusub dhexdiisa waxaa ku yaal hal aayad wanaagsan oo rasuul Bawlos ku qoran wuxuu ka hadlaa iskutallaabta Masiixa inuu nacasnimo u yahay Gariiga iyo buuq ku yaha Yuhuudda (1 Korintos 1,23) , Way fududahay in la fahmo sababta uu u samaynayo bayaankan. Ka dib oo dhan, sida laga soo xigtay Giriiggu, casriyeynta, falsafada iyo waxbarashadu waxay ahaayeen baadi goob sare. Sidee qof iskutallaabta lagu qodbay u gudbiyayo aqoonta gabi ahaanba?
Waxay ahayd qaylo iyo rabitaan xor ah xagga maskaxda Yuhuudda. Taariikhdooda oo dhan waxaa lagu weerarayay awoodo fara badan oo had iyo jeer lagu ceebeeyo awoodaha haystay. Hadday ahaan lahayd reer Ashuur, reer Baabuloon ama reer Rooma, Yeruusaalem ayaa marar badan bililiqaysatay oo dadkii degganaa waxay noqdeen guri la’aan. Muxuu Cibraaniga jeclaan lahaa qof ka badan oo daryeela kiiskooda oo la dagaallama cadowga gebi ahaanba? Sidee Masiixa iskutallaabta lagu qodbay u noqon karaa caawimaad?
Iskutallaabtu waxay nacasnimo u ahayd Gariigta. Yuhuudda, waxay ahayd buuq, iyo wax lagu turunturoodo. Muxuu yahay iskutallaabta Masiixa, maadaama ay si adag uga soo horjeeddo wax kasta oo awood ku raaxaysan? Iskutallaabta lagu qodbay waxay ahayd wax laga xishoodo, oo laga xishoodo. Waxay ahayd wax laga yaqyaqsado in Roomaanka, oo iyagu ku takhasusay farshaxanka jirdilka, ay u dammaanad qaadeen muwaadiniintooda in qof reer Rooma aanu weligiis iskutallaabta lagu qodbi doonin. Kaliya kaliya maahan eey ceyrsaneysay, iyaduna sidoo kale waxay ahayd mid xanuun badan. Runtii, ereyga Ingriisiga ee xad dhaafka ah (walwal) waxay ka timaadaa laba erey oo Latin ah: "ex cruciatus" ama "iskutallaabta iskutallaabta". Iskutallaabta ayaa ahayd erayga caadiga ah ee silica.
Taas miyaanay taasi ina hor joogsanayn? Xusuusnow - is-hoosaysiinta iyo cidhiidhiga Tani waa habka Ciise doortay inuu gacantiisa nafo ku badbaadiyo. Waad aragtaa, waxaan dembiga ugu yeedhnay, laakiin waxa aan si naxdin leh ugu naqno waxaay jebinaysaa sharaftii loo abuuray. Waxay ku keentaa sharaf dhac jiritaankeena iyo xanuun jiritaankeena. Waxay naga soocdaa Ilaah.
Maalin jimce wanaagsan, laba kun oo sano ka hor, ciise wuxuu soo maray dulli aad uxun iyo xanuun si uu noogu soo celiyo sharaftii xiriirkii ilaah iyo bogsashada nafteena. Ma xasuusataa in tan loo qabtay adiga oo ma aqbali doontaa hadiyaddiisa?
Markaa waxaad ogaan doontaa inay tahay dembi, nacasnimo. Daciifnimadeena ugu weyni maaha cadowga dibada, laakiin waa cadowga gudaha. Waa rabitaankeenna daciifka ah ee nagu dhicisa. Laakiin Ciise Masiix wuxuu inaga xoreeyaa nacasnimada dembiga iyo daciifnimada nafteena.
Taasi waa sababta dhabta ah ee uu rasuulku usii waday inuu ku wacdiyo Ciise Masiix sidii iskutallaabta lagu qodbay oo ahayd xoogga Ilaah iyo xigmadda Eebbe. Iskutallaabta u imow oo hel xooggeeda iyo xigmaddeeda.
Waxaa qoray Ravi Sakariyaas